Hurumende Inoumba Komiti Ichaongorora Kufambiswa kweNyaya dzeHupfu Munyika
Ndira 24, 2020
Vanogaya upfu vanonzi vari kufanirwa kutengesera vezvitoro, avo vanofanirwawo kuzotengesera veruzhinji, asi zvinonzi hupfu huri kuzoenda pamusika mutema.
Hurumende yazivisa nhasi kuti yaumba komiti ichange ichiona kuti hupfu hwafambiswa zvakajeka here kubva kune vanohugaya kuenda kune vezvitoro, senzira yekudzivirira kushaikwa kwehupfu munyika.
Komiti iyi, iyo inonzi ichange ichitungamirirwa nemutewedzeri wegurukota rezvekutengeserana, VaRaji Modi, uye ichaona kuti hupfu uhwu hahusi kutengeswa pamisika mitema, apo huri kutengwa nemari iri pamusoro.
Vanogaya upfu vanonzi vanofanirwa kutengesera vezvitoro, avo vanofanirwawo kuzotengesera veruzhinji, asi zvinonzi hupfu huri kuzoenda pamusika mutema husingasvike kuzvitoro.
Zvinonzi hupfu, zvikuru hwe roller meal, uhwo hurumende iri kubatsira vanogaya kuburikidza nekuvapa mari, kana kuti subsidies, kuitira kuti vagozohutengesa nemutengo uri pasi, huri kushaikwa muzvitoro umo hunofanirwa kutengeswa nemutengo unokwaniswa neveruzhinji.
Asi pamusika mutema hunonzi hunowanikwa chero nguva huchitengeswa hwaiswa mutwutsapo twudiki, kana kuti tsapo dzahutogadzirwa nadzo asi dzichitengeswa nemutengo unogona kupetwa katatu.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira, VaMasimba Kuchera, vanoti havaoni danho ratorwa nehurumende iri richibatsira zvakanyanya sezvo risiri kugadzirisa chakonzera dambudziko rekushaikwa kweupfu munyika.
VaKuchera vanotiwo hakasiri kekutanga kuona makomiti akadai achiumbwa nehurumende asi pasina zvaanoshanduka.
Vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti nyika yadzokera pakurima kwayo kwakare, uye makambani achivhurwa, kuitira kurerutsa dambudziko rekushaikwa kweupfu, pane kudzika mitemo inorambidza vanhu kutenga upfu hwavanoda.
Hurukuro naVaMasimba Kuchera
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutengeserana, Amai Sekai Nzenza, kanawo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Asi nhengo yeZanu PF, vari muzvinabhizimusi, VaGilbert Muponda, vanoti vanoona danho ratorwa nehurumende iri riri danho richagadzirisa zvinhu munyaya dzekuwanikwa kwehupfu nemunhu wese.
VaMuponda vanoti pane humbowo hwekuti vamwe vezvitoro pamwe nevanogaya upfu vari kuendesa upfu uhwu pamusika mutema, asi ivo vachiziva kuti hurumende yakavabhadhara mari kare yekuti vatengese nemutengo uri pasi unokwaniswa nevanhu vese.
Vanotiwo hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kuona kuti makomiti akadai aburitsa chimuko chinozobatsira mukuvakwa patsva kwehupfumi hwenyika.
Hurukuro naVaGilbert Muponda